Bayanda abalingisi abahlaba uhulumeni
ABALINGISI boZalo, uBaby Cele noSiyabonga Shibe bagxeka uhulumeni ngokungawanakekeli amaciko Isithombe: FACEBOOK
CHARLES KHUZWAYO | May 12, 2020
BAYANDA abalingisi abakhwela bedilika kuhulumeni bemsola ngokungawakhathaleli amaciko.
Indaba isuswe ukuchithwa kwezinye izicelo zemali yokutakula amaciko emalini enguR150 million. Kuqale umlingisi woZalo, uSiyabonga Shibe, owenze i-video ebigxibha uMnyango wezeMidlalo, ezobuCiko namaSiko ngokunakekela kakhulu abezemidlalo kunamaciko futhi waze waphakamisa ukuthi ezobuciko kumele zisuswe kwezemidlalo. Lo mlingisi odlala indawo kaQhabanga kuZalo owayenguSifiso kuGaz’lam, ukhulume kanje emuva kwesithangami nabezindaba obekukhuluma kuso uNgqongqoshe walo Mnyango uMnuz Nathi Mthethwa, ngeledlule.
“Ukuhlanganisa ezemidlalo, ezobuciko namasiko akuwasebenzeli amaciko. Imali eningi ifakwa kwezemidlalo. Unyaka nonyaka sihlale sikhuluma ngalokhu. Usizi lodwa kithina.” Uqhube wathi uhulumeni akanandaba nenhlalakahle yamaciko.
“I-Covid-19 icekele thina phansi kakhulu. Sizama ngayo yonke indlela ukwenza iNingizimu Afrika iziqhenye ngathi njengamaciko. Basidinga kuphela uma kufanele sidlulise imiyalezo,” kukhala uSiyabonga.
Nozakwabo uBaby Cele, uthe usebe kule ndima yezobuciko iminyaka ewu-35 futhi wahlukanisa kaningi emishadweni ngoba ekhethiswa phakathi kwalo msebenzi nomshado kodwa akhethe ukulingisa ngoba kuyena kuwubizo.
“Ngakhetha le ndima, abanye bazothi ngazikhethela, mhlawumbe baqinisile angazi kodwa engikwaziyo wukuthi ngisemsebenzini ofanele ezweni elingafanele,” kusho uBaby onguGabsile kuZalo.
Nosomahlaya uThenjiwe Moseley ubuze ukuthi kungani bamosha imali yabazali babo ngokufundela umsebenzi othathwa kancane.
“Abaholi bakhumbula ubumqoka bethu uma sekuyisikhathi sokukhankasela ukhetho,” kusho uThenjiwe wodumo lukaJaji Khambule neMeet The Khambules.
Nomlingisi onguLilian Nyandeni kwiSibaya, uLinda Sebezo, uthe usephila ngemali yempesheni kanina emuva kokuchithwa kwesicelo sakhe nguMnyango wezoBuciko namaSiko.
Uthe kusho ukuthi uMthethwa uyodela mhlazane uma elinye iciko lazibulala.
Okhulumela uMthethwa, uMasechaba Khumalo, uthe kwacelwa wonke amaciko nabezemidlalo, hhayi abezemidlalo kuphela ukuba bafake izicelo esikhwameni sokutakula abakhahlanyezwe ukuvalwa kwezwe thaqa.
“Sinethemba lokuthi naye wasifaka isicelo. Alikho iqiniso kulezi zinsolo zokuthi ezemidlalo ziyenzelelwa uma ziqhathaniswa nezobuciko. Eqinisweni, ubufakazi esinabo busho okwehlukile nakushoyo. Izicelo zabezemidlalo zibalelwa ku-10% kulesi sikhwama sotakulo bese * -80% kuya ku-90% uqhamuke embonini yezobuciko.”
UMasechaba ube esecela amaciko achithiwe ukuba aphinde athumele izicelo kule-email: [email protected]
Unxuse amaciko ukuba azi ukuthi yize kunemithetho okufanele ilandelwe kodwa uMthethwa uzama ngawo wonke amandla ukutakula amaciko kulesi sikhathi esinzima.
Khonamanjalo iSABC1 ikhiphe isitatimende lapho iveze khona ukuthi umdlalo uZalo luzokhuza ibuya ngeziqephu ezintsha ngoJuni 15.